Ngalaba njem nlegharị anya Jamaica na -anya mgbake akụ na ụba siri ike
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Ngalaba njem nlegharị anya Jamaica na -anya mgbake akụ na ụba siri ike
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Caribbean • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Izu Ịmata Njem Nleta Jamaica
N'okwu e mere dị ka akụkụ nke izu izu ike ndị njem na Jamaica, Septemba 26 ruo Ọktoba 2, Mịnịsta na -ahụ maka njem, Hon. Edmund Bartlett, na-agba ụmụ amaala niile ume ka ha nweta ọgwụ mgbochi megide COVID-19 iji zọpụta ndụ ma gaa n'ihu na-agbake mgbake akụ na ụba agwaetiti ahụ.
Mịnịsta na -ahụ maka njem na -agba ụmụ amaala ume ka ha gbaa ọgwụ mgbochi ọrịa ka agwaetiti a na -eme ememme izu ike njem.
N'ileghachi anya na mgbake n'ozuzu ya, ọnụnọ nke ndị njem dịka onye na -anya mgbake ahụ apụtala n'ime obodo.
Ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa na ndị obodo niile ka na -abụ ihe kacha mkpa na Jamaica.
“Ka anyị na -eme ememme Ịma Ọkwa Njem Nleta n'okpuru isiokwu bụ 'Njem Nleta Maka Mgbakwunye ibu, 'ka anyị tinye ịgba ọgwụ mgbochi ọrịa na ngwakọta, n'ihi na nke ahụ bụ ihe ga -eme ka mgbake anyị zuo oke mana nke kachasị mkpa ịchekwa ndụ, "Minista Bartlett kwuru. “Ka anyị na -elele etu anyị siri gbakee n'ozuzu ya, ọnụnọ ndị njem dịka onye na -anya mgbake ahụ apụtala nke ọma. Anyị ewepụtala ego ruo ijeri US $ 1.2 n'ime akụ na ụba anyị ebutela ihe karịrị otu nde ndị ọbịa na mba ahụ. "
Minista Bartlett gara n'ihu ikwu, sị, “Anyị emeela ihe otiti ahụ n'ụzọ dị oke mma na ụwa achọpụtala ụzọ ndị egwuregwu nọ na ụlọ ọrụ na mba ahụ n'ozuzu si ebu usoro Jamaica. Anyị ga -ejikwa ọrụ nlekọta anyị ka anyị ghara ịhapụ onye ọ bụla. ”
Ahụike na nchekwa nke ndị ọbịa na ndị obodo niile ka na -abụ ihe kacha mkpa na Jamaica. Na mbido ọnwa a, agwaetiti ahụ bidoro usoro ịgba ọgwụ mgbochi iji kwado nchịkwa nke ọgwụ mgbochi agwaetiti niile yana ọtụtụ ịgba ọgwụ mgbochi afọ ofufo na-agbasa na saịtị dị mkpa gafee mba ahụ. Mbanye a bụ ndọtị nke mmemme JAMAICA CARES, nzaghachi mba na COVID-19 nke gụnyere Resilient Corridors nke agwaetiti yana usoro ahụike na nchekwa zuru oke.
Jamaica's Resilient Corridors, nke kpuchiri ihe karịrị pasenti 85 nke ngwaahịa njem nlegharị anya agwaetiti ahụ gụnyere ihe na -erughị otu pasent nke ndị bi na ya, edekọwo ọrịa ọrịa na -erughị otu pasent n'afọ gara aga. Nke a na -egosi nke ọma na mmemme a, nke bụ naanị ụdị ya na Caribbean. Ọ na -enye ebe nchekwa maka ndị ọbịa ịnụ ụtọ ngwaahịa njem, ebe ọ na -ewepụ kọntaktị na ọtụtụ ndị obodo.
Jamaica ka ghe oghe maka njem ma na -aga n'ihu na -anabata ndị ọbịa n'udo. Ọ bụ usoro ahụike na nchekwa dị n'etiti ndị izizi ịnata World Travel & Tourism Council (WTTC) Njem Njem Nchekwa nke nyere ohere ka njem ahụ mepee ọzọ n'enweghị nsogbu iji mee njem na June 2020. Agwaetiti a ekwupụtakwala nso nso a gbakwunyere ụgbọ elu sitere na isi ahịa isi mmalite na iri itoolu. pasent nke itinye ego ndị njem nlegharị anya na -aga n'ụzọ.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Jamaica, biko gaa na nleta nlekọta.